Kismaayo News » Dr. Maxamed Wali oo dawro ka bixiyey Kismaayo
Dr. Maxamed Wali oo dawro ka bixiyey Kismaayo
Kn: Gudoomiyaha Jaamacada Kismaayo, islamarkaasina ah madaxa hey’adda qeeyriga ah ee Toowfiiq ee ka hawlgasha Soomaaliya oo muddo sanooyin ah kadib dib ugu laabtay Kismaayo ayaa halkaasi doowrooyin iyo siminaaro ka bixiyey.
Tabobar ku saabsan maamulka iyo maareynta oo la siinayay shaqaalaha jaamacadda Kismaayo iyo shaqaalaha Hey’adda oo soconayay muddo dhowr maalmood ah ayuu DR. Maxamed Wali ka bixiyey jaamacada Kismaayo.
Mar uu waraysi siiyey shabakada KismaayoNews ayuu sheegey in siminaarkani uu hordhac u yahay dadaalo ay ku doonayaan in ay ku hormarinayaan mihnadda maamulka, iyadoo marka hore shaqaalaha jaamacadda iyo shaqaalaha hey’adda oo jaamacada iyo mashaariic kale wada la taabogalinayo.
Waxa uu Dr. Maxamed Wali sheegey in ay jirto baahi badan oo xirfadlayaal xagga maamulka iyo maareynta ah, isagoo sidoo kale farta ku fiiqey in gobolada Jubbooyinka aysan jirin daraasad la sameeyey oo ay ka go’aan qaataan hey’adaha, shirkadaha iyo dowladaha.
Jaamacada Kismaayo oo ay dhigtaan dhawr boqol oo arday ayaa ah mid hiigsanaysa mustaqbal wanaagsan, islamarkaasina ka fikireysa sidii loo gaari lahaa aayo wanaagsan, taasi oo loo marayo waxbarashada.